सूर्यबहादुर सोम्याहाङ राई र जगतबहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मोरङका दुई पत्रकारलाई प्रदान गरिने - Janapukar
सूर्यबहादुर सोम्याहाङ राई र जगतबहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मोरङका दुई पत्रकारलाई प्रदान गरिने
उर्लाबारी - मोरङको पथरी घर भई हाल विदेशमा रहेका दुई युवाले स्थापना गरेको सूर्यबहादुर सोम्याहाङ राई र जगतबहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मोरङका दुई पत्रकारलाई प्रदान गरिने भएको छ ।
नागरिक दैनिकका पत्रकार चुमन बस्नेत र पथरीकै रेडियो सिम्रिकका लोकबहादुर चौहानलाई जनही १०–१० हजार रूपैयाँ राशीको उक्त पुरस्कार प्रदान गरिने भएको ‘स्व.सूर्य बहादुर सोम्याहाङ राई र स्व. जगत बहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’को अक्षयकोषका संयोजक गोपाल काफ्लेले जनाकारी दिएका छन् ।
विदेशमा रहेका मोरङ पथरीका दुई युवाले पत्रकारिता पुरस्कारका लागि १ लाख रूपैयाँको अक्षयकोश स्थापना गरेका हुन् । अमेरिकामा रहेका अजय सेन र क्यानडामा रहेका मनिष सम्बाहाम्फेले ५०÷५० हजार रकममा उक्त कोष स्थापना गरेका हुन् । पथरी स्पोर्टिङ क्लबको मातहतमा रहने गरी स्थापित उक्त कोषबाट हरेक वर्ष मोरङ कार्यक्षेत्र बनाएर कलम चलाउने २ पत्रकारलाई ‘स्व.सूर्य बहादुर सोम्याहाङ राई र स्व. जगत बहादुर सम्बाहाम्फे स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार’ दिइने भएको हो ।
पथरीशनिश्चरे–१ का अजय सेनले आफ्ना हजुरबुवा स्व. सूर्य बहादुर सोम्याहाङ राई र पथरीशनिश्चरे–७ मा बसोबास गर्दै आएका हाल क्यानडामा रहेका मनिष सम्बाहाम्फेले आफ्नो बुवा स्व. जगत बहादुर सम्बाहाम्फेको स्मृतिमा सो पत्रकारिता पुस्कारको अक्षयकोषको स्थापना गरेका हुन् । पथरी स्पोर्टिङ क्लबले गठन गरेको छनोट समितिबाट यसपटक दुई पत्रकारलाई सम्मान गर्न लागिएको हो ।
पुरस्कार शुक्रबारदेखि सुरु भएको ‘मोरङ च्यालेन्ज’को फाइनल अर्थात २० गते दिइने भएको छ । अबदेखि कोषमा रहेको रकमको ब्याजबाट जति पैसा आउँछ त्यसलाई बराबर दुई जनालाई बाँढेर दिन लागिएकोको संयोजक काफ्लेले बताएका छन् । यसपटकको लागि भने पहिलो पटक भएकाले मनिष र अजय दुबैले पुरस्कार रकम दिएका हुन् ।